Uzoba njani Imigca kunye neeMilo eziSisiseko kwiPowerPoint yakho yeZilayidi ezingama-2016
Ukuzoba into kwisilayidi sePowerPoint 2016, qala ngokufowunela i-Insert tab kwiRibhoni. Emva koko ucofe iqhosha leMilo (elibekwe kwiqela leMifanekiso) ukuveza igalari yeemilo onokukhetha kuzo, njengoko kubonisiwe apha. Okokugqibela, khetha imilo ofuna ukuyizobela kwigalari yeeMilo.
Nazi izikhombisi ekufuneka uzigcine engqondweni:
Ukukhetha indawo: Phambi kokuba uzobe into, yiya kwisilayidi ofuna ukuyizobela loo nto. Ukuba ufuna into ivele kwisilayidi ngasinye kwiprizenteyishini, bonisa iSilayidi esiyiSilayidi ngokukhetha iSilayidi esiyiSilayidi kwiCandelo lokuBona okuKhulu kwithebhu yokuJonga kwiRibhoni okanye ngoShift + ucofe iqhosha leMbono oQhelekileyo.
Ukulungisa impazamo: Ukuba wenza impazamo ngelixa uzobe imilo, thengisa umyalelo kwiThulbha yoFikelelo oluKhawulezayo inokukulungisa impazamo.
Ukubamba iqhosha leShift: Ukuba ubamba iqhosha leShift ngelixa uzobe imilo, i-PowerPoint inyanzela imilo ukuba ibe rhoqo. Oko kukuthi, uxande zizikwere, ii-ellipses zizangqa, kunye nemigca inyanzelisiwe ukuba ethe tyaba okanye ethe nkqo, okanye iidigalali ezingama-45.
Ukuzoba imigca ethe tye
Ungasebenzisa iqhosha lomgca ukuzoba imigca ethe nkqo kwizilayidi zakho. Nantsi inkqubo:
Cofa iqhosha lomgca kwiqela leZimo kwithebhu yokuFaka.
Yalatha isikhombisi apho ufuna ukuqala khona umgca.
Cofa kwaye utsale isikhombisi apho ufuna ukuba umgca uphele khona.
ipilisi emhlophe g 31
Ukukhupha iqhosha le mouse xa ufika kwindawo oya kuyo.
Ipilisi emhlophe ep 904
Emva kokuba uzobe imilo, iRibhoni ibonisa ithebhu yezixhobo zokuzoba, njengoko kubonisiwe. Unokusebenzisa ulawulo kwiqela lesimbo sokutshintsha ukutshintsha ukugcwalisa, ulwandlalo, kunye nefuthe elisetyenzisiweyo kumgca.
Ithebhu yefomathi yeRibhoni yezixhobo zokuzoba
Emva kokuba uzobe umgca, unokuyihlengahlengisa ngokunqakraza kwaye emva koko urhuqe izibambo ezibonakala kwisiphelo ngasinye somgca.
Khumbula ukuba unokunyanzela umgca ukuba ube ngokuthe tyaba okanye ume nkqo ngokubamba iqhosha leShift ngelixa uzobe. Ukuba ubambe isitshixo seShift kwaye utsale idiagonally ngelixa udweba umgca, umgca uya kunyanzeliswa kwii-angles ezingama-45 ezigqibeleleyo.
Ukudweba uxande, izikwere, iiovali, kunye nezangqa
Ukuzoba uxande, landela la manyathelo:
Kwithebhu Faka, cofa amaqhosha eMilo (kwiqela leMifanekiso), emva koko ucofe iqhosha eliyiRectangle.
Yalatha isikhombisi apho ufuna ukuba ikona enye yoxande ibekwe kakuhle.
ipilisi emhlophe pliva 433
Cofa kwaye utsale apho ufuna ukuba ikona ejongene nexande ibekwe.
Khupha iqhosha le mouse.
Amanyathelo okudweba i-oval ayafana namanyathelo okudweba uxande ngaphandle kokuba ucofa iqhosha le-Oval kunokuba iqhosha elixande. Ukuzoba isikwere okanye isangqa esijikeleze ngokugqibeleleyo, khetha iqhosha eliyi-Rectangle okanye iqhosha le-Oval kodwa ubambe iqhosha leShift ngelixa uzobe.
Ungahlengahlengisa ubungakanani okanye ukumila koxande okanye isangqa ngokunqakraza kwaye urhuqe naziphi na izibambo zaso zothando (izangqa ezincinci ozibona kwiikona zomilo).
Ndingayithatha iminiquil ngexa ndonga
ukhuphela umculo kubadlali be mp3
Iipilisi ze-flagyl 500 mg
ithebhulethi emhlophe engama-627
Isichongi sepilisi esingekho semthethweni esinemifanekiso